जनतालाई बैंकिङमा जोड्ने माध्यम नै हामी हौं
परिवर्तन देवकोटा ३० फागुन ।
काठमाडाैं । पछिल्लो समय आक्रामक रुपमा लघुवित्त वित्तिय सँस्थाहरु खुलिरहेका छन् । विस्तारमा वृद्धिसँगै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न समेत उठिरहेको छ । त्यस्तै, मनपरी व्याजदर, नाफामुखि लगायतका विभिन्न आरोप समेत लाग्दै आएको छ । यीनै समसामयीक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भई जनतापाटीका लागि परिवर्तन देवकोटाले लघुवित्त बैंकर्स संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाशराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, लक्ष्मी लघुवित्तका सिईओ समेत रहेका शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा लघुवित्त वित्तिय सँस्था लिमिटेड शुरुवात भएको वि.सं. २०४९ सालदेखि हो । सुरुमा यो गैरसरकारी सँस्थाबाट सुरु भएको हो । पछि सरकारी तवरबाट गरिबी निवारण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको पहल तथा नेपाल सरकारको केही प्रतिशत लगानीमा ग्रामिण बैंकको स्थापना भएसँगै नेपालमा लघुवित्तको शुरुवात भएको हो ।
त्यतिखेरै गैरसरकारी क्षेत्रबाट निर्धन स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तिय संस्थाको स्थापना भएको हो । अहिले लघुवित्तको शुरुवात भएको नै २५/२६ वर्ष भैसकेको छ । अहिले यो युवावस्था पार गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ । त्यस्तै यसको व्यापक रुपमा विस्तार, विकास र परिपक्व भयो । यसको विस्तार र विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगी भूमिका रह्यो । सानो पुँजीमा लघुवित्त खोल्न दिने, पुँजीको लागि वाणिज्य बैंकहरुको विपन्न वर्ग कर्जाको व्यवस्था, स्रोतको परिचालनलगायत प्रवद्र्धनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । लघुवित्तलाई अहिलेको यो अवस्थामा ल्याउन लघुवित्तकर्मीको पनि उत्तिकै भुमिका रहेको छ ।
लघुवित्तको संख्या सय पुग्न लागे । यतिधेरै संख्यामा लघुवित्त स्थापना हुँदा यसको सेवाको प्रभावकारिता कस्तो रहला ?
नेपालमा अहिले क, ख, ग र घ वर्ग गरी चार प्रकारको वित्तिय संस्था रहेका छन् । राष्ट्र बैँकले क, ख र ग वर्गका वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना गर्न स्थगित गरेको छ । राष्ट्रबैंकले यिनीहरुलाई मर्ज तथा एक्विजेशनमा जोड दिइरहेको छ । तर घ वर्गको वित्तिय संस्था चाहिँ स्थापना गर्न दिईरहेको छ । अहिले यो ९२ वटा लघुवित्त दर्ता भईसकेको अवस्था छ । केहि समयमा ११४ वटा पुग्छन् । यो संख्या देशको लागि आवश्यक हो या होईन बहस हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले यसलाई मर्ज वा एक्विजिसन गर्नुपर्ने र संख्या घटाउनुपर्ने कुरा समेत गर्दै आएको छ । तर कसरी यसलाई घटाउने भन्ने विषयमा कुनै कार्यक्रम नै देखिँदैन । मर्ज र एक्विजिसनबिना यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।
लघुवित्तले बैंकिङ बानी, पुँजी परिचालन, वित्तिय पहुँच, गरिबी निवारण, समावेशी वित्तिय अवस्था सिर्जना गर्नमा भूमिका खेलेका छन् । यस्तो हुँदाहुँदै पनि डर भने सिर्जना भएको छ । आवश्यकताभन्दा बढि लघुवित्त हुँदा दुर्घटना हुन सक्छ । लघुवित्तिको अहिले माग भन्दा पनि आपूर्ति बढि भएको छ । यसो हुँदा स्वभावतः विकृति विसँगती आउँछन् । लघुवित्तलाई पिपुल, प्रोफिट र प्लानेट गरि तिनओटा बटमलाईनमा हेरिनुपर्दछ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु सेवाभन्दा पनि नाफामुखि भएको भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
यो के हो भने, पुँजी सानो थियो र कारोबार ३० गुणा बढि । थोरै पुँजीमा नाफा धेरै देखियो । यसले त नाफा बढि नै देखियो । पिपुल, प्रोफिट र प्लानेटमा प्रोफिटलाई बढि जोड दिइयो, जसलाई हामी ओभर कमर्सियलाईजेसन भन्छौँ । जो अब ३० देखि ४०, ५०, ६० प्रतिशतसम्म लाभांस दिईराखेको अवस्था छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर त्यो पैसा त्यहिँ बोनस शेयरमा दिएका छन् । त्यो पैसा कारोबारमै लगाएका छन् ।
देख्दाखेरी के देखियो भने, त्यसको भाउ बढाए र अरु पनि आकर्षित भए । क ख र ग नखुलिरहेको अवस्थामा यसमा सानो पुँजी भएका कारण पनि आकर्शित भए । ति मान्छेहरु २/३ वटा उद्देश्यहरुले यहाँ आए । कोहि राम्रो उद्देश्यले आए, समाजमा राम्रो गर्छु, समाजलाई वित्तिय स्रोत परिचालन गर्छु भनेर आए । केही मान्छेहरु छिटो नाफा कमाउँछु, छिटो धनी हुन्छु भनेर आए । ति मानिसहरुलाई त रोक्न सकिँदैन । त्यसैकारण पनि संस्थाहरु बढे । विगत पाँच/सात वर्षमा चाहिँ यसको वृद्धिविकास भएको हो । हामीले लक्ष्मी लघुवित्त २०६७ मा दर्ता गराएका हौँ । त्यतिखेर हामी २३ नम्बरमा दर्ता भयो । आज सातआठ वर्षमै यो २३ बाट बढेर ११४ मा पुग्दैछ भने यसको वृद्धि कस्तो छ ? यसैकारण पनि विकृति विसङ्गतीहरु भित्रिए । अहिले आवश्यकताभन्दा बढि लघुवित्त भएका कारणबाट बढि विकिृत निम्तिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
लघुवित्तहरुले मनपरी व्याज लिने गरेकै हुन् त ?
व्याजदरमा पहिले सञ्चालन खर्च बढि नै लाग्छ । यसै कारण पनि पहिले यसको २० प्रतिशत व्याजदर लिएकै हो माइक्रोफाइनान्सले । व्याजदरसँगै अरु खर्चहरु पनि हेर्नुपर्छ । यो व्याजदर धेरै भयो भनेर राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशतमा झार्योे । त्यो गर्दाखेरि अवस्था कस्तो आयो भने कर्जाको व्याजदर पहिले ६/७ प्रतिशतको व्याजदर १४ प्रतिशतमा पुर्याईयो । राष्ट्रबैकले नीति ल्याएपछि त्यसको पालना गर्नुको विकल्प थिएन । तर समस्या भयो । हामीले बैंकलाई लबिङ गर्यौं । यहाँ प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैकारण पनि मैले २०/२२ प्रतिशत व्याजदर लगाउछु भन्यो भने त्यो विक्दैन । त्यसैकारण ९ प्रतिशत मार्जिन भएता पनि लघुवित्तले त्यो लागु गरेन । अहिले लघुवित्तलाई हेर्नेहो भने पहिलेको तुलनामा धेरै कम नाफा छ । अहिले कसैले १८/२० प्रतिशतभन्दा बढि व्याजदर लिएजस्तो लाग्दैन । यसमा राष्ट्रबैंकको नियमन, सुपरभिजन तथा निर्देशन छ । म दावी गरेर भन्छु, व्याजदरमा मनपरि भएकै छैन ।
लघुवित्त क्षेत्रमा विभिन्न नकारात्मक असरहरु देखिएका छन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
व्यवसाय गर्न नै संस्था स्थापना हुन्छ । पहिले नै आपूर्ति बढि भएको हुन्छ । अनि त्यहि ठाउँमा शाखा खोलिन्छ । अनि पहिले मानिसहरुलाई ५ हजार कर्जा दिएर वितिय अवस्था सुरु गरिन्छ । तर अहिले पहिलोपटक नै ठुलो रकम दिने गरिन्छ । ग्राहक त्यहि हुन्छ । जसका कारण निष्क्रिय कर्जा बढ्यो । यसपछि कर्जा ठुलो भएपछि एकैवर्षमा वा छिटो नाफा कमाउने प्रवित्ति बढ्यो । र समस्या श्रृजना भयो ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी लघुवित्तकर्मीहरुले कर्जा सुचना केन्द्रलाई अलि भरपर्दो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । अहिले भएको कर्जा सुचना केन्द्र विभिन्न समस्याहरुका कारण प्रभावकारी भएन । कर्जा सुचना केन्द्रमा सबै सदस्यहरुको सुचना दिइने हो भने एक लघुवित्तबाट कर्जा लिएको अवस्थामा अर्कोबाट लिन सकिँदैन । लघुवित्त भनेको लिमिटेड कम्पनीका साथै सोसियल बैंकिङ हो । यसका आफ्ना सिद्धान्तहरु, आफ्ना मर्महरु हुन्छन् । त्यो मर्महरुको पालना गर्नुपर्छ । एकैपटक नाफा कमाउने मान्यता लिनुभएन । आफ्नो कारोबार विस्तारै विस्तार गर्नुपर्छ । लघुवित्तको सिद्धान्तहरुको पालना गर्नुपर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा लघुवित्तका चुनौतिहरु केके छन् ?
लघुवित्तमा सबैभन्दा चुनौतिको विषय भनेको स्रोत जुटाउनु नै हो । हामी बैंक तथा वित्तिय सँस्थाहरुको परनिर्भर छौँ । त्यो परनिर्भरतामा कच्चा पदार्थको मूल्यमा हाम्रो कुनै भुमिका छैन । कमर्सियल बैंकले मूल्य निर्धारण गर्छ र व्याजदर पनि तोक्छ । हामीलाई त्यो मौका छैन । उनीहरुले १३ प्रतिशत भने हामीले १३ प्रतिशत नै लिनुपर्ने हुन्छ, १४ भने १४ नै । सुक्ष्म लघुवित्त छ भने उसले ९ प्रतिशतमा पनि लिईरहेको अवस्था छ । अर्को भर्खरको लघुवित्त छ भने १४/१५ प्रतिशत लिनुपर्ने अवस्था छ । पुरानो संस्थामा उसको कारोबार पनि बढिरहेको हुन्छ । यसैकारण यसको स्रोत जुटाउन मुख्य चुनौति रहेको छ ।
अर्को, संस्था आवश्यकताभन्दा बढि हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । जसले अन्य विकृतिविसंगतीहरु देखा परेका छन् । मुलुकको आवश्यकता निर्धारण गरि हाम्रो हैन राम्रो संस्था बनाउनुपर्यो । यो नै अर्को चुनौतिको विषय हो । हामीले व्यवसाय गर्नेहरुलाई आवश्यकताभन्दा बढि ऋण दिएर प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । जसलाई बहुबैंकिङसमेत भनिन्छ । पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र भन्ने उखान जस्तै यसबाट हामीले सदस्यहरुलाई आकर्षित गरिरहेका छौँ ।
पहिले हामीले लाइभली ओन विजिनेसबाट माइक्रोफाइनान्स सुरु गरेका हौँ । अब यसलाई कमर्सियलाईजेसन गर्नु अहिलेको आवस्यकता हो । जस्तो कि, पहिले हामीले एउटा बाख्राको लागि कर्जा दिएर यो सुरु गरेका हौँ । तर अब एउटा बाख्राको लागि नभई व्यवसायको लागि हुनुपर्छ । जसले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिन सकोस् ।
नियमनकारी निकायले लघुवित्तका लागि के के गर्नपर्दछ ?
राष्ट्रबैंकले लघुवित्तलाई जारी गरेको निर्देशनलाई मात्रै पालना गरेपनि धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो कतिपय गर्न पाउनुपर्ने चिजहरु चाहिँ दिनुपर्यो । उदाहरणका लागि, कमर्सियल बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको केहि प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । तर गर्न सकेको अवस्था छैन ।
त्यस्तो चिजलाई त लघुवित्तहरुलाई संलग्न गराउन सकिन्छ । तर यसमा पनि समस्या छ । थरिथरिका लघुवित्तहरु, हिजो खोलेका पनि छन्, धेरै पुराना पनि । यस्तो गर्न राष्ट्रबैकलाई के समस्या छ भने, दिने हो, कानुनी अधिकारको कुरा छ, नदिने हो यस्तै समस्या छ ।
हामीले २५/२६ वर्षमा मुलुकको विकासका लागि धेरै काम गरेका छौँ । नेपालको गरिबी ३१ बाट २१ प्रतिशतमा झर्नुमा हाम्रो योगदान छ । वित्तिय पहुँच २०/२५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुगेको छ, अहिले क्रेडिट कल्चर विकास भएको छ, यसमा पनि हाम्रो योगदान छ । बैंकिङको विकासमा हाम्रै योगदान छ । योलगायत विपन्न, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबैतर्फ हामीले राम्रो गरेका छौँ । तर यो सँगै हाम्रा कमजोरीहरु, विकृतिहरु पनि देखिएका छन् । यसलाई कानुनी रुपमा हामीले मिलाउनुपर्छ । राष्ट्रबैकले यसको नीतिनिर्माणमा लागेमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।
लक्ष्मी लघुवित्तको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?
२०६७ मा स्थापना भएपनि यसको कारोबार सुरु भने २०६९ बाट भएको हो । त्यतिखेर नेपालमा बाणिज्य बैंकको सहायकको रुपमा यसको स्थापना भएको हो । लक्ष्मी बैंकले दुईवटा कारणले यसको स्थापना गर्यो । एउटा कारण भनेको, सामाजिक दायित्व पुरा गर्न र अर्को भनेको, कम्पीटेटिभ एडभान्टेजका लागि । यो संस्था कमर्सियल बैंकको सतप्रतिशत शेयर भएको पहिलो संस्था हो । लक्ष्मी बैंकका सेवा सुविधाहरु हाम्रो च्यानलमार्फत हामीले दिइरहेका छौँ । अहिले सातै प्रदेशमा ६२ शाखाहरु सञ्चालनमा छन् । यसमा करिब ७३ हजार ग्राहक आवद्ध हुनुहुन्छ । यसले आजसम्म नोक्सान व्यहोरेको छैन । हामीले गुणस्तर तथा प्रविधिलाई फोकस गरेका छौं । हामीले अब सबै सेवाहरुलाई डिजिटलाइज गर्दैछौं । जसमा हामीले ट्याबलेट बैंकिङ, मोबाइल बैकिङलगायत सुविधा ल्याउँछौँ । त्यस्तै, हामीले मार्केट रिसर्चका आधारमा दिईरहेको सेवासुविधालाई परिमार्जन गरिरहेका छौं । अहिलेको लघुवित्तलाई हामी अर्को चरणमा लान्छौं ।
लाभकारी किशमिश खानुका यस्ता छन् फाईदा
चुम्बकिय रेल !
विश्वकप किक्रेट : यी हुन् ह्याट्रिक विकेट लिने ९ खेलाडी (भिडियो रिपोर्ट)